Muuri News Network » Dhageyso: Alshabaab oo Faah faahin Cusub ka bixiyay Weerarkii G/Shabellaha Hoose..
Dhageyso: Alshabaab oo Faah faahin Cusub ka bixiyay Weerarkii G/Shabellaha Hoose..
Maleeshiyaadka Alshabaab Afhayeenka dhanka howlgalada u qaabilsan Sheekh C/casiis Abuu Muscab, ayaa waxaa uu faah faahin dheeri ah uu ka bixiyay dagaalkii, ay hal habeen ka hor Ciidanka Mareykanka kula galeen Deegaanka TooraToorow Ee Gobolka Shabellaha Hoose.
C/casiis Abuu Muscab, ayaa waxaa uu sheegay in ciidan ay ku tuhmayaan kuwa Mareykanka inay soo qaadeen weerar iyaga ka dhan ah, isla-markaana ay ku fashiliyeen meel 2km u jirta Deegaanka Toora Toorow. Wuxuu sheegay in markii hore ay diyaaradaha kaga soo daggeen meel 6km u jirta Deegaankaasi.
Sheekh C/casiis Abuu Muscab ayaa intaa ku daray in Ciidankaasi ay wateen laba helicopter, ayna dib ugu laabteen diyaaradahaasi, xilli sida uu sheegay ay weerarka fashiliyeen.
Ciidamada Mareykanka ka joogga Somaliya oo kaashanaaya Ciidanka Kumaandooska Soomaaliyeed, ayaa waxay billihii ugu dambeeyayba wadeen hawlgalo xilliga habeenkii ah, kana dhanka ah mintidiinta Al Shabaab.